Mbola ho ela vao hanana izay hialofany ny fianakaviana
Zo fototra ny fananana trano fonenana araka ny fanambarana maneran-tany momba ny zon’olombelona. Raha ny eto Madagasikara fotsiny dia mila fanorenan-trano miisa roa alina any ho any isan-taona. Olana lehibe io noho ny fitomboan’ny mponina, ny halafosan’ny tany sy ireo akora fanamboarana ary indrindra noho ny tsy fisian’ny tany fanorenana. Manana tapitrisa maromaro ny fianakaviana iray vao afaka miroso amin’izany.
Namolavola politika nasionaly ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny ministeran’ny fanjariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana hanaporofoana amin’ny vahoaka fa mitsinjo ireto farany izy. Natomboka izany tamin’ny fananganana trano mora, fanorenana trano ho an’ny mpianatra eny amin’ny Oniversite, trano ho an’ny mpiasam-panjakana sns…
Ao tokoa ilay finiavana kanefa ny fahefa-mividin’ny vahoaka mihitsy aloha no hatsaraina vao afaka mieritreritra ny ambiny. Mila omena asa aloha ny ray sy renim-pianakaviana hahafahany manao tahiry amin’ny fananganana trano fonenana; ilainy koa ny fananan-tany satria raha eny rehetra eny izy no hanorina dia hinoana fa tsy maintsy ho tratran’ny fandravana any aoriana any. Na dia hanangana trano mora aza ny fanjakana kanefa tsy takatry ny vahoaka ny vidiny, mitovy amin’ny tsy manana ihany izany. Mety hisy alaim-pnahy hiteny fa maro koa ireo Malagasy manangana trano mijoalajoala etsy sy eroa ka mana-porofo fa manam-bola ny vahoaka. Ireo manan-katao izay vitsy an'isa izay fa tsy ny saramba. Hatsarao ary aloha ilay fari-piainan’ny vahoaka alohan’ny hisainany momba izay hisitrihany.